Kandawgyi Palace ဟိုတယ် ကို ထူး ထရေးဒင်း မှ ဝယ်ယူရန်သတင်းထွက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » Kandawgyi Palace ဟိုတယ် ကို ထူး ထရေးဒင်း မှ ဝယ်ယူရန်သတင်းထွက်
Kandawgyi Palace ဟိုတယ် ကို ထူး ထရေးဒင်း မှ ဝယ်ယူရန်သတင်းထွက်
Posted by ဂျစ်စူ on Oct 17, 2010 in Myanma News | 11 comments
ရန်ကုန်-October 17, 2010
မြန်မာ အင်အားကြီး စီးပွားရေး ကုမ္ပဏီ ဖြစ်သော ထူး ထရေးဒင်း မှ ရန်ကုန်မြို့တော် ကန်တော်ကြီးစောင်းရှိ Kandawgyi Palace ဟိုတယ်ကို ထိုင်း ပိုင်ရှင်ထံမှ ပြန်လည် ဝယ်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းတစ်ရပ်တွင် အောက်တိုဘာ ၁၇ ရက်နေ့က ဖော်ပြခဲ့ကြောင်း monstersandcritics သတင်းဆိုက် ကရေးသားခဲ့သည်။
ထူး ထရေးဒင်း မှ ပြောရေဆိုခွင့် ရှိသူတစ်ဦးက ဟိုတယ်ကို ဝယ်ယူရန် သေခြာပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သော်လည်း ဈေးနှုန်းကို ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခြင်း မရှိပေ။ သို့သော် ဒေသတွင်း မီဒီယာ အချို့က ဟိုတယ်၏ ဈေးနှုန်းကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၉ သန်းခန့်ဟု ဖော်ပြခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
Kandawgyi Palace ဟိုတယ်သည် ရန်ကုန်မြို့ ကန်တော်ကြီး စောင်းတွင် တည်ရှိပြီး မြန်မာ့ ကျွန်းသစ်များဖြင့် အလှဆင် တည်ဆောက်ထားကာ ဘန်ကောက် အခြေစိုက် Baiyoke Group of Hotels မှ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
မြို့ တော် ပုသိမ် သတင်းမှာ ဒီနေ့ ဖော်ပြထားတဲ့ သတင်းပါ။
ပြောပုံအရတော့ ဟိုတယ်ကို မ၀ယ်ရသေးပါဘူး။
ဘယ်လိုပြောရမလဲ.. တိုင်းတပါး ပိုင်ကနေ နိုင်ငံသားပိုင် ဖြစ်သွားတာဘဲ ကျန်တာ ဘာများ ပြောင်းလဲ နိုင်အုန်းမလဲ..
ဘယ်နေရာ မဆိုသူဘဲဝယ်နေတာ ပိုက်ဆံ ကော်တကယ်မှပေးရဲ့လား
၀ယ်နေတာတွေက ပိုက်ဆံ မပေးရတဲ့ အတိုင်းပဲလို့ ဆိုလိုတာပေါ့
နိုင်ငံသားပိုင်ဖြစ်ရင် ပိုကောင်းမှာလား ပိုဆိုးလာမှာလားဟင်…
ယုအက်စ်လို စူပါပါဝါလည်း The Buy American Act ဆိုပြီး ထုတ်ထားတာကို ပြန်အာဖြည့်လို့ ..ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုယ့်ပစ္စည်းနဲ့ ကိုယ်လူနဲ့အတွက်..လုပ်နေရတာပဲ..။
Baiyoke Group လည်းတကယ်တော့ မြန်မာ-အမေရိကန်တယောက်ကပိုင်တာပါပဲ..။အမျိုးတွေအတင်းလိုက်စပ်ရင် ..ဦးအောင်ဆန်းဦးဆီရောက်သွားတော့မယ်..။
ဒါမျိုးတွေကို ဖော်ထုတ်ဖို့ ဝန်မလေးနဲ့ဆရာရေ။ ဂျပန်ခေတ်တုန်းက ကိုယ်နှမကို ဂျပန်တွေကိုပေးပြီး အခွင့်ထူးခံလုပ်စားတဲ့ သူတွေဟာ အခုထိရှိနေဆဲပဲဆိုတာ ပြောရမယ်ဗျို့။ ( သူ့နာမည်သုံးပြီးပြောရတာ အဘိုးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ အမေစုကို အားနာလို့မဆုံးပါ)
အမျိုးသားရေးနဲ့ ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ပွဲ တရားမျှတခြင်းနဲ့ကြည့် ဘာမှမရှိ ပြည် သူဘဝ ငတိ…….၊?
ဒီဟော်တယ်တွေဟာ နှစ်ချုပ်ငှားတဲ့ သဘောပါ ဥပမာ ၁၀နှစ်၊၁၅နှစ်ကြာရင် နိုင်ငံပိုင်တွေပြန်ဖြစ်မှာပါဘဲလေ….။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကောင်းပေ့ ညွန့်ပေ့ ဆိုတဲ့ စီးပွားရေးတွေကို “ထူး” ကပဲလုပ်ခွင့်တွေ ရနေတာလေ… သူများက အစပျိုးလိုက် သူတို့က ကောက်စားသွားလိုက်နဲ့… “ထူး” နာမည် မဟုတ်ဘဲ တခြားနာမည်တွေ နဲ့ လုပ်နေတဲ့ စီးပွားရေးတွေမှ တပုံကြီး…”ထူး” ကပိုင်တာကြီးပဲ….
…..ကောင်းပါတရ်…. လုပ်ကြပေါ့…ဒင်းတို့ခေတ်ပဲ….”ကျန်းမာကြပါစေ ၊ ချမ်းသာကြပါစေ”………….
အခုတော့ဖွဲ့စည်းပုံက မှောင်နေလို့သိပ်အမြင်မလှပါဘူး ။ နိုင်ငံခြားသားကြိုက်မကြိုက်တော့မသိဘူး ကန်တော်ကြီးကနေပြောင်းပြီး ထရိတ်တားပြောင်းတည်းတဲ့ဧည့်သည်တွေတွေ့ဖူးတယ် ။ ဈေးကလည်း နိုင်ငံခြားသားအတွက်သက်သက်သာသာပါပဲ ။ ပြည်တွင်းက လုပ်ငန်းရှင်အချို့ကတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းအဖြစ်သုံးတာများတယ် ။ ပိုင်ရှင်ပြောင်းတော့ အပြင်ဆင်လည်း ပြောင်းလာမယ်မျှော်လင့်ပါတယ် ။